Sawiro: Qatar oo ballan-qaad culus u sameysay Somaliland - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Qatar oo ballan-qaad culus u sameysay Somaliland
Sawiro: Qatar oo ballan-qaad culus u sameysay Somaliland
Hargeysa (Caasimada Online) – Safiirka Qatar ee Soomaaliya ayaa gaaray caasimada Somaliland ee Hargeysa, halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyen Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo masuuliyiin kale.
Amb. Hassan Bin Hamza Hashem ayaa magaalada Hargeysa u yimid kormeerka iyo sidii uu indhihiisa ugu arki lahaa baaxadda dhibaatadii uu geystay dabkii dhawaan ka kacay suuqa weyn ee Waaheen.
Madaxweyne ku-xigeenka oo ay wehelinayaan guddida gurmadka iyo taakulaynta suuqa Waaheen, xubno kamid ah golaha wasiirrada, ayaa safiirka geeyey badhtamaha suuqa gubtay ee Waaheen oo ay weli ka socoto nadiifinta hadhaaga hantidii gubatay.
Waxa uu safiirku indhihiisa ku arkay inta ay le’eg tahay dhibaatada dabku geystay, isaga oo muujiyey sida uu uga xun yahay dhibka gaadhay dhaqaalihii bulshada reer Somaliland ee halkaas ku ganacsan jirtay.
Saylic ayaa safiirka uga xog warramay dhibaatada uu dabku gaadhsiiyey ganacsatadii suuqa ku ganacsan jirtay iyo hantidii kala duwanayd ee halkaas taallay, waxana uu sheegay inay kumanaan qof oo hantiileyaal ahaan jiray haatan faro-madhnaan taagan yihiin oo uu dabkaasi hantidoodii baabi’iyey.
Safiirka dalka Qatar oo ay wehelinayaan, Fahad Al-Dehemi oo ah sarkaal ka socday gargaarka caalamiga ah ee Qadar iyo Yuosef Al-Mulla oo ah Cilmi baadhe dhinaca Gargaarka Bini’aadamnimada ee Qadar iyo Ali Abdullah Al-Dabbagh, ayaa muujiyey sida ay uga tiiraanyeysan yihiin dhibka gaadhay hantidii bulshada reer Somaliland.
Ugu dambeyntiina waxa uu Amb Hassan Bin Hamza uu wareejiyey mucaawimo raashin ah oo ay ugu talo-galeen 750 qoys oo oo danyar ah, isaga oo ballan qaaday inay ka dawlad ahaan ka qayb qaadan doonaan dib-u-dhiska suuqa gubtay ee Waaheen.